Warshad Xirfadleyda Phcoker ee Dhexdhexaadinta Daawooyinka Iyo API-yada
Shirkad ku takhasustay dhexdhexaadka dawooyinka firfircoon (APIs)
ISO9001: 2000 xeerarka iyo waafaqsanaanta heerarka cGMP.
In ka badan 20 waaya-aragnimada daawo-takhasuska leh oo leh taageero farsamo oo ku filan.
Iyadoo guulaha ugu dambeeyay ee sayniska iyo farsamada, wax soo saarka Shangke waa mid aad wax ku ool ah oo dabiici ah.
Kooxdayada adeegga macaamiisha waxay bixiyaan taageero farsamo iyo cilmi ah oo heer sare ah oo macaamiisha ah waqtigii loogu talagalay.
Alaabadayada Muhiimka ah
Guudmarka Palmitoylethanolamide (PEA) Waxaa jira warbixino sheegaya in Maamulka Cuntada iyo Dawada ay ogolaadeen inay soo gudbiyaan arji f ...
Miyaad ka dhimatay gabowga? Waa hagaag, daroogada kahortaga gabowga shaki la'aan xulashada ugu kalsoonida badan ee dib u noqoshada kaydka bayoolajigaaga
Maxaynu ugu baahanahay Magnesium? Kahor intaanan guda galin Magnesium L-Threonate nootropic supplement, waxaad u baahan kartaa inaad fahanto abo ...
Guudmarka guud ee galantamine Hydrobromide Galantamine hydrobromide waa dawo dhakhtar qoro oo loo isticmaalo in lagu daaweeyo waallida cudurada Alzheimers ...
Guudmarka PRL-8-53 Buunbuunintii loo yaqaan 'PRL-8-53' oo ah daroogo cilmi-nafsi ku dheehan tahay ayaa dib loo raadin doonaa horraantii 1970-yadii. Nikolaus Hansl, oo ah borofisar ka tirsan C ...
Kordhinta Cycloastragenol: Faa'iidooyinka, Qiyaasta, Badbaadada & Cilmibaarisyada
Guudmarka 'Cycloastragenol' Cycloastragenol (CAG) oo sidoo kale loo yaqaan 'T-65' waa tetracyclic triterpenoid dabiici ah oo laga helo Astr ...
NAD + Precursors ee Gabowga: Doorka The (NR) Nicotinamide Riboside Chloride Xaqiiqda ka-hortagga gabowga
Nicotinamide riboside (NR) iyo nicotinamide riboside (Chloride) Nicotinamide riboside (NR) chloride waa nooc kaloriin ah n ...
Khibradda Oxiracetam: Sidee budada oxiracetam ii dareensiiyaa?
Waa maxay Oxiracetam? Oxiracetam waa mid ka mid ah waxyaalihii hore ee nootropic ee laga heli jiray qoyska cunsuriyada. Waxay ahayd mid saddexaad oo cunsuriyad ah ...
Waa maxay 9-ME-BC? 9-Me-BC (9-Methyl-β-karboline) oo sidoo kale loo yaqaan 9-MBC waa sheeko nootropic cusub oo ka socota kooxda β-karbolineline. ...
Shaybaarada R & D
Isku qor si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeyay ee shirkadeena.